I-Apple Pay imihlaba eMexico ineebhanki ezininzi ezikhoyo | IPhone iindaba
I-Apple Pay imihlaba eMexico ineebhanki ezininzi ezikhoyo
Ingelosi Gonzalez | 24/02/2021 17:00 | Ukuhlaziywa ukuba 25/02/2021 11:03 | Apple Pay, Izaziso
UApple Pay unathi iminyaka esixhenxe. Ukusukela oko yangeniswa ngo-2014, amazwe aliqela ayifumene inkonzo kwaye uninzi lweebhanki kunye neevenkile zidibanise iqonga kumakhadi abo kunye neentlawulo. Nangona kunjalo, abasebenzisi kwamanye amazwe amaninzi abanalo iqonga kwaye abanakuba namakhadi abo kwizixhobo zeApple. Izolo I-Apple Pay ifike eMexico, Elinye lawona mazwe abalulekileyo kwiLatin America apho, kude kube ziintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, inkonzo ibingafumaneki. Ukufika kudlula kwiibhanki ezintathu: iAmerican Express, iBanorte kunye neCitibanamex.
IMexico ekugqibeleni ifumana ukufika kweApple Pay
NgoDisemba, iApple yaqinisekisa amajelo eendaba ukuba iApple Pay iza kufika eMexico kwiinyanga ezizayo. Kwiinyanga ezimbalwa kamva igosa: I-Apple Pay ngoku iyafumaneka eMexico. Ndiyabulela kule nkonzo, amadoda nabafazi baseMexico abafuna baya kubanakho ukufaka amakhadi abo kwizixhobo zabo ukuze bakwazi ukuhlawula kwilizwe liphela, kumaziko avumela oko.
I-Apple Pay isebenza namakhadi etyala kunye namatyala ebhanki kwezona ntanethi zibalulekileyo zokuhlawula, ezikhutshwe ziibhanki ezahlukeneyo zesizwe. Chukumisa uphawu lokudibanisa ukongeza amakhadi athatha inxaxheba kwiWallet kwaye uqhubeke nokonwabela izibonelelo kunye nembuyekezo ngokhuseleko oluphezulu.
Inkonzo iza phantsi kweebhanki ezintathu: American Express, Banorte kunye neCitibanmex. Ezi zimbini zokugqibela zinika amakhadi e-Mastercard kwaye zezona zinokufakwa kwinkonzo. Ngoku lithuba lezinye iibhanki zokujoyina inkonzo kwaye zibenakho ukubonelela ngokubanzi phakathi kwezigidi zabasebenzisi beApple abahlala eMexico.
Ngokuphathelele ulwazi olusemthethweni, iApple sele ihlaziyiwe iwebhusayithi yakho kunye neebhanki ezihambelanayo kunye nalo lonke ulwazi olunxulumene neApple Pay ekufuneka umsebenzisi eyazi. Siza kubona ukuba kwiinyanga ezizayo amazwe aseLatin America ajoyina inkonzo esetyenziswa ziibhiliyoni zabasebenzisi mihla le.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple Pay imihlaba eMexico ineebhanki ezininzi ezikhoyo
ULuis Daniel sitsho
Mholo!! Njengokubona singamaMexico / amaMexico ane-X
Phendula uLuis Daniel
Isixhobo sokufikelela kwiAnker sikhupha ibhetri ehambelana nebhetri ehambelanayo
Umceli mngeni omtsha weApple Watch ukubhiyozela uSuku lwaBasetyhini lwaMazwe ngaMazwe